बसन्त महर्जन (जन्म इ.सं. १९७२) मूलतः अन्वेषक तथा लेखक हुन् । इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व क्षेत्रकाे अध्ययन अनुसन्धान तथा लेखनमा सक्रीय उनी बाैद्ध इतिहास र दर्शनमा विशेष रूची राख्छन् ।
साना ठुला गरी २००० भन्दा बढी लेख र ९ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । बाैद्ध धर्मबाहेक साहित्य, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, पर्यटनलगायत विषयक्षेत्रका पुस्तकहरू प्रकाशाेन्मुख छन् ।
उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बाैद्ध अध्ययन (स्नातकाेत्तर) मा 'गाेल्ड मेडलिष्ट' हुन् । नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्वमा पनि स्नातकाेत्तर हुन् । अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा नेपाल र एशिया अनुसन्धान केन्द्र (सिनास, त्रिभुवन विश्वविद्यालय) मा पनि अावद्ध रहिसकेका उनी प्राध्यापन, विभिन्न प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रवचन, कार्यपत्र प्रस्तुति र विषयगत क्षेत्रमा परामर्श पनि दिन्छन् ।
उनी अन्वेषक यात्री हुन् । बहुअायामिक दृष्टिकाेणसहितकाे यात्रा र लेखनकाे संयाेजनका कारण यसलार्इ व्यक्तिगत स्तरमा हेर्नु मनासिव हुँदैन । अर्काे पक्ष हाे, फाेटाेग्राफी । उनका फाेटाेग्राफीहरू एेतिहासिक तथा साँस्कृतिक स्थल, जनजीवनमा 'फाेकस' हुन्छन् । अाफ्नाे विषय क्षेत्रमा केन्दित उनी समग्रमा भन्नुपर्दा अभिलेखीकरण, अन्वेषणमा र लेखनमा सक्रीय छन् ।
इन्साइट पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित पुस्तकहरू
उत्तरी नेपालमा बाैद्ध धर्म
उत्तरी नेपालमा प्रचलित बौद्ध धर्मलाइ तिब्बती बौद्ध धर्म पनि भनिन्छ । तिब्बतमा विकास भएकाे बाैद्ध धर्म नै नेपालकाे उत्तरी क्षेत्रमा अाएकाे र परम्पराहरू उतैकाे भएका कारणा तिब्बती बाैद्ध धर्म भन्नुमा अन्यथा लिनु पर्दैन । तर उत्तरी नेपालमा प्रचिलत बाैद्ध धर्म वा अभ्यासमा स्थानियता पनि पाइन्छ जसकाे अध्ययन हुनु पर्दछ । तिब्बतबाट अाएकाे भएपनि कतिपय कुरा तिब्बतमा नै प्रचलनबाट हराइसकेका अमूर्त संस्कृतिहरू नेपालमा सुरक्षित रहेका छन् यस अर्थमा तिब्बतकाे अध्ययनमा उत्तरी नेपालकाे हिमाली क्षेत्रमा प्रचलित बाैद्ध धर्मकाे अध्ययन गर्नै पर्ने भएकाे छ । पुस्तक उत्तरी नेपालमा प्रचलित बाैद्ध धर्मकाे साङ्गाेपाङ्गाे अध्ययन नभएर परिचयात्मक प्रस्तुति हाे ।
बुद्ध र मानव अधिकार
मानव अधिकार अाधुनिक विश्वका लागि नाैलाे अवधारणा र अभ्यास हाे । मानव अधिकारकाे अभावमा मानवले प्रतिष्ठापूर्णा जीवन विताउन सक्दैन । तर मानव अधिकार नै भनेर उल्लेख नपाइएपिन गाैतम बुद्धका उपदेशहरू मानवअधिकारकाे अवधारणासँग नजिक रहेकाे पाइन्छ । मानव अधिकारकाे अवधारणा तथा यससँग सम्बन्धित घाेषणापत्र, महासन्धी, अालेख तथा अन्य कुराहरूकाे चर्चा गर्दै ती सँग बाैद्ध विषयवस्तुकाे सम्बन्धलाइ केलाउने काम बुद्ध र मानव अधिकार पुस्तकमा गरिएकाे छ ।
कुनै पनि व्यक्ति जब समष्टिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ, उनका बारेमा विभिन्न थरीका कथाकहानी तथा किम्बदन्ती तथा लोकोक्तिहरूको सिर्जना हुन थाल्छन् र मान्छेहरू बढाइचढाइ कुरा गर्न थाल्छन्, जुन नौलो होइन । यसबाट वास्तविकता ओझेलमा पर्ने मात्रै नभएर विकृति नै बढाइदिने र समस्यामा पार्ने संभावना हुन्छ । प्रसंशाका क्रममा निस्कने यस्ता अतिरञ्जित कुराहरूले कतिपय मान्छेमा अरुची पनि पैदा गरेको हुन्छ । बुद्धका सम्बन्धमा पनि अनेकौं भ्रमहरू पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूमा नै छापिन थालेपछि सर्वसाधारणमा मात्रै नभएर बौद्धिक जमातमा नै पनि अन्यौल तथा समस्या सिर्जना भएको छ । केही भ्रमलाई चिर्ने प्रयास ‘बुद्ध एक भ्रम अनेक' पुस्तकमा भएको छ ।
बुद्धकालिन समयमा महिलाप्रतिको धारणा भन्नु र महिलाप्रति बुद्धको धारणा भन्नु एउटै कुरा होइन । बुद्धको समय वैदिक मान्यताको प्रभावबाट मुक्त भइसकेको थिएन तर बुद्ध त्यस्तो प्रभावको विरुद्धमा थिए । वैदिक मान्यताअनुसार समाजमा महिलाको स्थान बेग्लै थियो र वैदिकहरू त्यसको औचित्य साबित गर्न खोज्दथे । महिलामाथि अनेकौं बन्देजहरू थियो । महिलाले प्रवज्या लिन पाइँदैनथे । बुद्ध पनि सुरुमा महिलालाई प्रव्रज्या दिने पक्षमा थिएनन् तसर्थ महिलालाई भिक्षुणी नबनाई भिक्षु संघको मात्रै संचालन गरिरहेका थिए । तर पछि महिला वर्गको व्यापक दवावका कारण भिक्षुणी संघको स्थापना भयो । महिलालाई प्रव्रज्या दिन अनिच्छुक भएकै प्रसंग झिकेर गैरबौद्धहरू बुद्ध महिलामाथि पक्षपात गर्दथे वा महिलाका सम्बन्धमा बुद्ध उदार थिएनन् भन्ने आरोप लगाउने वा खिसी गर्छन् । तर वास्तविकता उक्त आरोपभन्दा निकै टाढा रहेको छ । धर्मको सवालमा महिला र पुरुषबीच कुनै फरक नभएको, समान रुपमा धर्मलाभ गर्न सक्छन् भन्ने उद्घोष गर्ने गौतम बुद्ध नै हुन् । यस अनुसार थुप्रै महिला भिक्षुणी भई धर्मलाभी बनेका थिए ।
गाैतम बुद्धसँग सम्बिन्धत स्थलहरू एेतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका छन् । बाैद्धहरू यी स्थलमा पुगी श्रद्धा व्यक्त गर्न पाउँदा पुण्य कमाएकाे अनुभूति गदर्छन् । साथै यी स्थलहरू पर्यटकीय गन्तव्य पनि हुन् । तसर्थ यी ठाउँहरूमा बाैद्ध मात्रै पुग्नु पर्दछ भन्ने छैन । र, संसारभरका गैर बाैद्धहरू यी ठाउँमा भ्रमणा गरेर ज्ञान अार्जन गर्दछन् । नेपालस्थित बुद्धसँग सम्बिन्धत ठाउँ मुख्यतः लुम्बिनी, कपिलवस्त, देवदह, रामग्राम, हुन् । यी स्थलहरूकाे भ्रमण गर्न र जानकारी लिन गन्तव्य लुम्बिनी एउटा भरपर्दाे माध्यम हाे । पुस्तकमा कतिपय अगर्लन कुराहकाे खण्डनसहित जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास भएकाेले याे पुस्तक पाठकका लागि थप उपयाेगी हुन्छ ।
गाैतम बुद्ध अाफैले अाफ्नाे जीवनवारे कुनै पुस्तक लेखेका छैनन् । तर विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न ठाउँहमा उपदेश दिँदा र प्रसंगवश कसैसँग कुरा हुँदा अाफ्नाे जीवन बारेमा पनि बताएका थिए । बुद्धका उपदेशहरू संकलन गर्ने क्रममा जीवनसम्बन्धी ती कुरा पनि संकलन गरिए । संकलित ती जीवनका प्रशंगहरू प्रथम पुरूषमा नै रहेका छन् । तर ती एक ठाउँमा नभएर त्रिपिटकअन्तर्गतका विभिन्न ग्रन्थहरूमा छरिएर रहेका छन्। तिनै विवरणकाे अाधारमा बुद्धकाे जीवन पुस्तक लेख्ने तथा चर्चा गर्ने गरिएकाे हाे । प्रथम पुरूष शैलीमा बुद्ध अाफैले अाफ्नाे बारेमा बाेलेका र छरिएर रहेका ती सामग्री संकलन तथा अनुवाद गरी बुद्धकाे अात्मकथा प्रस्तुत गरिएकाे हाे । सन्दर्भ सामग्रीसहित बुद्धकाे बारेमा बुद्धबाटै साे विवरण थाहा पाउनुकाे अानन्द बेग्लै हुन्छ ।
बुद्धको जीवनी मात्र थाहा पाउँदा पनि धर्मका धेरै कुराहरू थाहा पाइने हुन्छ । यही भएर मान्छेहरू बुद्धको जीवनी पनि पढ्न मन पराउँछन् । बुद्धका जीवनी पुस्तकहरू धेरै थरीका प्रकाशित छन् तर सबैले एउटा विवरण दिएको पाइँदैन । कसैले अलौकिक पक्षमा जोड दिएका छन् भने कसैले जनमानसलाई रोचक हुने कुराहरू पस्कने क्रममा अन्य चरित्रका कुराहरू बुद्धसँग जोड्न ल्याउने गरेको पनि पाइन्छ । इन्साइट पब्लिकेशनबाट प्रकाशित जीवनी पुस्तक ‘गौतम बुद्ध' मा प्राचीन बौद्ध वाङमयहरूमा आधारित भई पछि थपिएका कुराहरू केलाएर हटाउने काम भएको छ । पुस्तक लेखनका क्रममा ती मौलिक वाङमयमा आधारित भई ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक प्रमाणहरू खोज्ने काम भएको छ । मूल्यः १८०/-